NY FINOANA MAHAVONJY – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 septembre 6, 2013 septembre 3, 2013 Laisser un commentaire sur NY FINOANA MAHAVONJY
« …Mandehana, misehoa amin’ny mpisorona. Ary rehefa lasa izy ireo, dia nadio teny ampandehanana. Ary ny anankiray tamin’ireo, raha nahita fa sitrana izy, dia niverina ka nankalaza an’Andriamanitra tamin’ny feo mahery, sady niankohoka tamin’ny tongotr’i Jesosy ka nisaotra Azy… » Lioka 17: 14-16
Nisy mararin’ny habokana folo lahy nifanena tamin’i Jesosy, ary niantso mafy Azy ny mba hamindràny fo. Tsy nandositra azy ireo Jesosy fa namaly Azy: Mandehana miseho any amin’ny mpisorona. Ny boka dia tokony hiseho amin’ny mpisorona mba ho jerena ny fivoaran’ny aretina.
-Tsy tonga dia fanasitranana anefa no nomen’i Jesosy ireto boka folo lahy, fa mbola nasainy nandeha ho any amin’ny mpisorona izy aloha. Nino an’i Jesosy ireto marary ireto, satria nihaino ny Teniny izy ireo ka lasa nandeha hiseho any amin’ny mpisorona: Ny valin’izany finoana an’i Jesosy izany: Sitrana, nadio teny ampandehanana izy folo lahy.
– Ny mampalahelo anefa rehefa sitrana ireo dia iray tamin’izy folo lahy ihany no nahatsiaro nankalaza an’Andriamanitra ka niverina niankohoka teo amin’i Jesosy. Ity iray ity ihany no voavonjy!
Publié parfilazantsaramada septembre 6, 2013 septembre 3, 2013 Publié dansUncategorized